YAANYO "BOBCAT": SIFOOYINKA IYO DHAMMAAN FAAHFAAHINTA KORITAANKA - NOOCYO YAANYO
Yaanyo "Bobcat": sharaxaadda kala duwan iyo xeerarka beeritaanka iyo daryeelka
Beeraley kasta wuxuu jeclaan lahaa in uu yaanyo ku yeesho sawirka oo ku farxi lahaa dhadhan iyo dhalid.
Mid ka mid ah noocyada noocaas ah ayaa loo qoondeeyay dib u eegista maanta.
Yaanyo "Bobcat": sharaxaad iyo sifooyin
Aan aragno waxa kala duwan ee noocaas ah waa mid cajiib leh iyo waxa aad u baahan tahay inaad taxadarto marka ay koraan.
Warshadda waxaa iska leh noocyo dhexdhexaad ah. For yaanyo "Bobcat" magaca caadiga ah waa dhererka baadiyaha ilaa 1.2 mitir, maaddaama ay le'eg tahay cabbirkan oo ah geedo caafimaad leh oo caafimaad qaba. Waxay u muuqdaan kuwo dufan badan oo ballaadhan, oo leh laan la horumariyey.
Khubarada ayaa ogaanaya in noocyada noocan ahi ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaan "determinant". Taasi waa, kobaca firfircoon ee iyaga ayaa dhacaya kaliya ilaa muuqaalka ugxan ugxan. Taas ka dib, baadiyaha ayaan mar dambe "kicin". Burushka ugu horreeya wuxuu u muuqan doonaa 6 - 7 caleemo, iyo inta u dhaxaysa iyaga iyo ugxanshiiba wuxuu noqon doonaa ugu badnaan saddex caleemo. Ka dib muuqaalka qiyaastii 6 ka mid ah ugxan-sidahan, koritaanku wuu dhammaanayaa.
Kuwani waa yaanyo ballaaran, oo miisaankoodu yahay 250 - 300 g, qaabkoodu wuxuu ku dhawyahay wareegga saxda ah, wax yarna waa la siman yahay, sida dhaqankan ku habboon. Si aad u taabato miro waa siman, oo leh dusha dhalaalaya. Indhuhu waa ku faraxsan yihiin midab casaan leh oo aan lahayn cagaar cagaaran.
Waa muhiim! Iibso shinni shati leh, iyo dukaanka khaaska ah waxaa lagaaga baahan yahay inaad keento dhamaan dukumiintiyada qalabkaas oo kale codsiga kowaad.
Tamaandho ma luminayaan tayadooda inta lagu jiro xilliga oo dhan ee fruiting.
Tamaandhada "Bobcat F1", iyo sidoo kale sharaxaadiisa, daneynaya, ugu horreyntii, sababtoo ah dhalidooda.
Harvest ayaa laga saari karaa 65 ilaa 70 maalmood ka dib marka la furo. Laga bilaabo 1 "laba jibbaaran" goobta ku urursan ugu yaraan 4 kg oo yaanyo ah. Tirada celceliska waa 6 kg, inkastoo qaarkood ay keenaan 8 (laakiin taasi waxay ku jirtaa jawi diiran oo leh taxadar taxadar leh).
Noocan ah "Dutchman" ayaa si wanaagsan loogu kala soocay difaac wanaagsan. Cudurada caadiga ah sida Fusarium fungus, tubaakada sigaarka ama verticillus ma aha mid cabsi leh isaga. Haddii aad ilaaliso heerkulka la doonayo iyo nidaamyada waraabka, ka dibna xayawaanka budada ah ma muuqan doono. Sidoo kale waxay khuseysaa cayayaanka. "Bobkaty" marar dhif ah ayay noqotaa meesha ay degan yihiin. Dhab ahaan, isla aphid ayaa ka soo daadi kara geedka jiran ee kale oo soo kordhay albaab kale. Sidaas darteed kormeerka joogtada ah ayaa kaliya faa'iido leh
Gobolada sii kordhaya
Tamaandho "Bobcat" waxaa lagu rijeynayaa goobaha diirran. Dhulkeena, waxa ugu fiican ee koonfureed ee koonfurta, labadaba waa lagu koriyo iyo berrin bannaan.
Ma taqaanaa? Tamaandhada ugu horeysay ee Europe loo keeno Yurub ayaa ku dhuftey qof walba oo leh mirahooda, laakiin sababo kale ayaa loo tixgeliyaa sun. Tamaandhada ayaa "amnestied" dhammaadkii qarnigii 16aad, markii beerashada dalaggu uu noqday mid baahsan.
Meelo badan oo waqooyiga ah ayaa ku haboon marka laga reebo habka dhirta lagu koriyo. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in hybrid thermophilic yahay mid picky ah oo ku saabsan heerkulka iyo iftiinka iftiinka. Sidaas xataa xitaa aqalka dhirta lagu koriyo ayaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn noocyada kala duwan, gaar ahaan haddii aaggu uu ku sifoobo qadhaadh soo noqnoqda inta badan xilliga gu'ga.
Bannaanka u badan ayaa ku hawlan qudaarta sii kordhaysa ee iibka, sidaas darteed xiisaha ay u leeyihiin khadadka cusub waa mid si macquul ah. Marka aynu kufaraxno qof maskax leh, aynu ku xisaabinno dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ka soocaya yaanyada Bobcat marka ay korayaan noocyada kala duwan.
Marka hore waxaan siinaa doodaha:
Muuqaalka muuqaalka ee miro cufan
Cudurka iyo kulaylka wanaagsan
Ha ka sii darin inta lagu jiro kaydinta dheeraadka ah
Hayso gaadiid aad u sarreeya (xittaa duulimaad dheer, ma waayi doonaan bandhiggooda)
Laakiin sidoo kale waxaa jira faa'iido darro:
Waa muhiim! Waa suurtogal in la beero abuurka dhulka marka laga reebo cimilada diiran ee xasilloon. Waxaa ammaan ah in lagu dhaqmo "geedo".
Iyadoo xaddiga ballaaran ee shaqada xoogga abuurku korodhay
U baahdo kormeer joogto ah. Wixii maktabadda dalka, oo la soo booqdo hal mar asbuucii iyo badhkeed, kala duwanaantani waa mid aan suurtagal ahayn inuu taam noqdo. Ugu yaraan qiyaasta ganacsiga.
Sida aan aragno, xaaladdan waxaa jira faa'iidooyin ka badan halista. Sidaa darteed, tallaabada xigta waa in la shaqeeyo geedo.
Koraaya geedo yaanyo
Iyadoo beereed iyo geedo naftooda, ma jiri doonto dhibaato khaas ah: hawlahaas waxaa loo sameeyaa si waafaqsan heerarka dhammaan qorshaynta yaanyada.
Baro naftaada noocyo kale oo yaanyo ah, sida Mikado Pink, Raspberry Giant, Katya, Maryina Roshcha, Gaadiidka, Prince Black, Pink Honey.
Ka hor inta aanad bilaabin soo degitaanka, shuruudaha waxaa lagu xisaabiyaa: 65 maalmood ayaa laga soo bilaabo taariikhda qorshaysan ee degitaanka ee furan. Wakhtiga marka loo baahdo si aad u bilawdo geedo way ku kala duwan yihiin gobollo kala duwan. Haddii gobollada koonfureed ay noqon doonaan "daaqad" inta u dhaxaysa Febraayo 20 illaa 15ka Maarso, ka dibna qaybta dhexe ayaa taariikhda laga soo bilaabo Maarso 15 ilaa Abriil 1. Ururada iyo gobollada waqooyiga, wakhtigu wuxuu ka bilaabmayaa 1 ilaa 15 Abriil.
Ma taqaanaa? Dheriga leh yaanyo daaqada qarnigii XIX wuxuu ahaa sawir muuqaal ah oo gobolkeena ah.
Tamaandhada "Bobcat", sida dib u eegista, uma baahna daaweynta abuurka dheeriga ah. Isku daa, foornada foornada iyo inta badan "chemistry" waa wax aan habooneyn.
Aynu bilowno beerashada:
Buuxi weelka (dheriyada, cajaladaha ama koobabka) buuxi ciidda qoyan nadiifka ah.
Waxaan samayno canjeero leh qoto dheer ilaa 1 cm iyo bareeg ah oo ku saabsan 3 illaa 4 cm u dhexeeya iyaga.
Inta u dhaxeysa abuurka waxay u baahan yihiin in ay raacaan fogaan ah 1.5 cm Haddii ay jiraan dhul ku filan oo geedo ah, waxaad qaadan kartaa wax badan. Ka boodboodeyaal ayaa kaa siinaya fursad aad ku ilaaliso geedo ku jira weelka ka dheer iyaga oo aan ula jeedin "dib u dajin."
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad buuxiso godadka hooseeya.
Si aan u hayno qoyaanka la rabay, waxaan ku dabooli karnaa weelka sare ee leh filim ama dhalo, ka dibna u dhig meel u dhow batteriga (si joogto ah + 25-30 ° C).
Ha ilaawin kormeerka maalinlaha ah. Ka taxadar carrada: haddii ay tahay mid aad u qoyan, si ku meelgaar ah uga saar muraayadda ama filimka, si aad dhulka u qalajiso. Ogow in ciidda si adag u qalajiyo, ku qoyi leh falejo, iyo waa waqti hore si aad ugu daadin jet toos ah.
Waa muhiim! Qalqaynta qoto-dheer ee substrate waa mid aan la aqbali karin.
Shuruudaha waa nalal wanaagsan. Marka ugu horeysa, maalinta qorraxda ayaa la maqnaan doonaa, ka dibna nalalka dhaadheer ayaa la socda.
Caleemaha ayaa jabin doona 10 ilaa 12 maalmood, ama xawaare badan (waxay ku xiran tahay heerkulka).
Filim dhammaystiran ayaa la saarayaa ka dib 1.5-2 usbuuc. Ka hor intaadan, siin sabuurada sida ugu badan ee suurtogalka ah. Kormeer aroortii, doorbid ka hor qorraxda, iyo sidoo kale inta lagu jiro maalinta: galabtii diiran, raajada xitaa waxyeello geedo. Dhirta kasta waxay leeyihiin mudo bilicsan, tayaduna waxay noqon kartaa (iyo waa in la sameeyaa). Weel dhuxul leh oo horeba u muuqda ayaa caleemaha laga qaadi karaa balakoonka ama daaqada furan, haddii ay ka baxsan tahay + 15 illaa 20 ° C.
Ka dib laba ama saddex toddobaad, caleemaha bislaado bacrimiya. Ujeedooyinkaas oo kale, kugula tali dharka organic, laakiin qaababka la iibsaday oo ku salaysan Humin ama biohumus ayaa noqon doona habka. Marxaladdan, qaado nus ka mid ah tilmaamihii baakidhka. Bacriminta dheeraad ah ayaa lagu dabaqayaa isku mid ah.
Geedo kasta waxay u baahan yihiin xayiraad. Tan iyo "Bobcat" - yaanyo iyo dabeecadihiisa oo dhan waxay muujinayaan kobaca dhexdhexaadinta baadiyaha, hal hawlgal oo noocaas ah ayaa ku filan.
Ma taqaanaa? Dufcaddii koowaad ee tamaandhada waxay soo gashay Ruushka sannadkii 1780. "Fruit Fruit" ayaa xitaa u qoondeeyay shaqaale gaar ah oo ilaalin leh.
Waxay sameeyaan marka ay geedo horay u xoogan yihiin (qiyaastii laba toddobaad ka dib muuqaalka):
Waxaan qaadanaa dherer weyn oo mug leh oo dheecaan leh.
Si taxaddar leh u wiiqdo seedling oo kala sooc ka soocka dhulka (iskuday inaadan calaamadin caleenta badan, waxaa fiican inaad ka shaqeysid qoryaha dhulka leh).
Xidigga ugu weyn waxaa la gooyaa qiyaastii 1/3, adoo jiidaya qaybta aan muhiimka ahayn.
In daloolka ah waxaan ka dhigi bacriminta fosfate.
U guuri seedling meel cusub, si tartiib ah u riixa xididka.
Dhibaato jilicsan. Isla mar ahaantaana, dhulka waa in la kululeeyo ugu yaraan + 20 ° C.
Baro wax badan oo ku saabsan korriin khudradda kale sida basasha, rocambol, yaanyada cherry, qajaarka qoryaha, toon, bacar, okra, zucchini.
Marka ugu horeysa korniinka koritaanku wuxuu joojin karaa. Sababtoo ah dad badan ayaa diiday in ay "joojiyaan" laf dhabarta. Haa, waa wax u nugul dhirta, laakiin habka caafimaadku wuxuu la qabsan karaa naxdintaas.
Geedi socodka iyo habka ugu wanaagsan ee loo beerto geedo yaanyo
Hal iyo badh bilood ka dib markii la beero, geedo ayaa "baabi'in" buraashka ubaxa ee hore. Markaan ogaanno tan, xisaabi 2 asbuuc ka hor: waa waqtigan xajmiga degaanka laga furayo.
Dhirta Perederzhivat ee dheriga ma u qalantaa, sababtoo ah noocyo tamaandho "Bobkat" qayb ahaan lumay dhalidda.
Waa muhiim! Yaanyo aan loo baahneyn oo loogu talagalay "horgalayaasha" ee aagga waa baradhada. Dhaqamadaasi waxay isku dayayaan in ay "jilaan" in ciidda ku jirtay midig saxan duurka.
Ka hor inta beerto, hubi in carrada diiran yahay. Waa in si wanaagsan loo walaaqo dambaska ama compost. Dhanka kale, quudinta xad dhaafka ah waxay sameyn doontaa yaanyada "fattened". Ma aha mid xun in la qabto iyo jeermiska dhulka leh copper sulfate.
Qorshaha beeritaanka waa mid fudud: 4 - 5 dhirta ayaa lagu darayaa dhibicda 1 mitir oo roon, adoo raacaya amarka "chess". Taasi waa, masaafada u dhexeysa duurka waa in aysan ka yarayn 0.5 m, 40cm u dhexdhexaad ah noocyo kale duwan ma shaqeyn doono (Bobcats waxay leeyihiin rizqiga ramified). Nidaamka abuurkiisa waa mid sahlan:
Godadka qodidda oo isla markiiba ku shub.
Inkasta oo qoyaanka la nuugo, geedo leh clod dhuleed ah ayaa si taxadar leh looga saaraa dheriyada.
Qabashada buruqda, dhirta ayaa loo wareejiyey meesheeda joogtada ah. Xilliga shaqadan, asaaska dhexe ayaa si yar loo qotodaa dalool qoyan (labo mitir oo dherer ah ayaa ku filnaan doona) si ay u oggolaadaan xididaha dheeraadka ah.
Ceelasha ayaa si tartiib ah loogu daboolay dhulka.
Noocyada daryeelka iyo beerista agrotechnik
Wixii soobax wanaagsan ayaa u baahan daryeel. Beelaha noo ah waa wax aan qabyo ahayn, laakiin waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah oo laga helo milkiilayaasha.
Ma taqaanaa? Halbowlaha miraha waa lycopene. Waxay ka hortagtaa muuqaalka unugyada kansarka waxayna xajisaa hababka bararka dabaysha.
Waraabinta iyo mulching
Dhirta kala duwan ee noocaan ah waxay u dulqaadanayaan maalmaha kulul si fiican. Run, waxaa fiican in lagu hayo qoyaanka sare ee ciidda. Eeg cimilada - xagaaga ee laba waraabinta toddobaadkii ayaa ku filan. Iyadoo daruuro sare, hal warshad badan oo isla mudadaas ah ayaa ku filan. Qof walba wuu ogyahay faa'iidooyinka mulching. Qalab badan ayaa loo isticmaalaa tan, sidaas awgeed waxaan si faahfaahsan uga sheekeyn doonaa iyaga. Sariiraha ayaa daboolaya:
Cawska ku dhaji (habka ugu fudud, taas oo ku habboon labada koriyo iyo dhul furan). Cawsku wuu jiifaa kadib dhowr maalmood oo qalajinta ah (ha ku degdegin in la dhigo isla markiiba ka dib).
Cawska saafiga ah (lakabka 10 cm ugu dambeyntii wuxuu degaa 5, sidaas darteed waxaad dhigi kartaa dhammaan 15 cm).
Dharbaaxada caanka ah ee hore waxay sidoo kale hayn doontaa qoyaan;
Filim dheelitir leh ayaa noqon kara caqabad ka soo cayayaanka (waa mid xiiso leh in yaanyada ay u fiican tahay in la qaato wax casaan ah).
Kuwani waa noocyo yar oo ah mulch, inkastoo xaqiiqda ay yihiin wax badan. Si kastaba ha ahaatee, waa noocyada ku haboon yaanyada.
Kalluunka dharka sare
Way fiican tahay inaad si joogto ah u sameysid, 2 asbuucba mar. Haddii ay sabab u tahay jadwalkan aan la dayactirin, markaa duurka ayaa la quudin karaa ugu yaraan saddex jeer xilli. Bacriminta naftooda sidoo kale waxay leeyihiin shuruudaha u gaarka ah: tusaale ahaan, waa in ay jiraan fosfooraska badan oo leh potassium xalka ka badan nitrogen. Joogitaanka qaybaha shakhsiyaadka ayaa sidoo kale muhiim ah: boron waxaa loo baahan yahay dhirta marka ay durbaba bilaabayaan inay ubaxaan, halka diyaargarowga magnesium-ku salaysan yahay wakhti kasta.
Waa muhiim! 50 g of superphosphate, 35 g oo ah chloride potassium iyo 15 g oo amooniyam ah ayaa lagu dari karaa baaldi 10 litir oo biyo ah. Isku darka, hel bacriminta wanaagsan.
Boronka isku midka ah ee noocyda asiidhka ah ayaa soo dhexgalay saamiga 1 g / 1 l oo biyo ah, ka dibna caleemaha cagaaran ayaa la buufinayaa.
Dharka ugu sareeya ayaa ugu fiican in la sameeyo galabtii.
Nidaamkan waxaa loo samayn karaa si joogto ah, iyada oo aan la ogaan karin in ay carruurtu kortaan ilaa 3-4 cm.
Caleemaha nadiifka ah ee la nadiifiyey ee ka muuqda burushyada. Haddii aad adkeyso dhirtu waxay si fudud uugu celin kartaa ubaxa ugxan-sidaha.
Ma jirto khiyaamo khaas ah: adoo xoqaya laba farood, si tartiib ah u jooji, u wareeji dhinac. Iska yaree si xoog leh ha u qalmin. Haddii ay hore u ballaadhan yihiin, waxaad isticmaali kartaa mindi.
Si loo abuuro baadiyaha saddex caws, waa inaad ka baxdaa baxsiga ugu xoogan, oo ka muuqda kan labaad. Labada afkoda, waxaynu u dhaqannaa si isku mid ah, kaliya waxaan ka baxeynaa geeddi-socodkii hore ee burushka ugu horreeya. Nidaamyadani waa in aan lagu maareynin kuleylka, si aanay u dhicin baadiyaha mar kale. In cimilada roobka, on lid ku ah, waxaa lagama maarmaan noqon doonaa in la nadiifin ma aha oo kaliya tallons, laakiin sidoo kale caleemaha hoose.
Geedo rujin ah oo u baxay inuu korayo - waa wakhti ay ku xiraan. Mishiinka mitirku waa ku filan yahay, waxaa loo qoondeeyay qoto dheer oo ku filan 10 sentimitir.
Ma taqaanaa? Tamaandhada ugu weyn waxaa loo tixgeliyaa 2.9-miro miro oo uu ku beeray beeraley laga soo bilaabo Wisconsin.
Buundada waxaa laga yaabaa in "la qaboojiyo" si ay trellis dijitaalka ah, waxaa xitaa ka fiican marka loo eego dhalidda. Haa, iyo sidoo kale ku haboon ee wax lagu nadiifiyo.
Sida kale ee "agrotechnics" kale, tallaabooyinkani waxay yareeyaan hilling (3 jeer xilli) iyo nadiifinta haramaha marka ay muuqato. Hadda waxaad taqaanaa waxa Bobcat ku fiican yahay iyo sida loo helo caleemo dhadhan fiican leh. Diiwaannada wax soo saarka!